बर्षाको मन मायाको बर्षाले भारी – bampijhyala.com
Home > मनोरञ्जन > बर्षाको मन मायाको बर्षाले भारी
२० बैशाख २०७८, सोमबार २३:२३ bampijhyala
बाँपीझ्याला, काठमाण्डौं । नायिका वर्षा सिवाकोटीको सामाजिक संजाल पछिल्लो केही महिनायता प्रेमको भावनाले भरिन थालेको छ । वर्षा सामाजिक संजालमा प्रेमका भावनाहरु पोख्न तल्लिन छिन् । चलचित्र ‘ए साथी सुन’को छायांकन सकेपछि वर्षा आफ्नै निजी जीवनमा व्यस्त छिन् । उनै, वर्षाको नाम पछिल्लो समय कलाकार राज कटुवालसँग जोडिएको छ ।
राज र वर्षा केही महिनायता प्रेममा छन् । प्रेमको कुरा सार्वजनिक रुपमा व्यक्त नगरेपनि वर्षा र राजले तस्वीर भने शेयर गर्ने गरेका छन् ।
वर्षाले राती सारी लगाएको तस्वीर सार्वजनिक गर्दै लेखेकी छिन्–‘तिम्रो मायाले भयो मेरो मन भारी । लगाइदेउ मलाई तिम्रो नामको रातो सारी’ । वर्षाको यो भनाइले पनि उनी रातो सारी लगाएर कसैको जीवनसाथी बन्न आतुर रहेको वुझ्न सकिन्छ ।
वर्षा र राजले यो बर्ष बिहे गर्ने तयारी गरेको चर्चा समेत चल्ने गरेको छ । तर, वर्षाले रातो सारी लगाउने रहर गरिसक्दा राजले भने कस्तो सुरसार गरेका होलान् कुन्नी ?
तामाकोशी गाउँपालीकामा कोरोना संक्रमण तिब्र, आज बेलुका ५ बजे देखि ८ गते बेलुका ५ बजेसम्म शहरे शिल २० बैशाख २०७८, सोमबार २३:२३
सम्झनामा जेठ ३ २० बैशाख २०७८, सोमबार २३:२३
शरीरमा अक्सिजनको कमी हुँदा किन घोप्टो परेर सत्नुपर्छ ? २० बैशाख २०७८, सोमबार २३:२३
माओवादी केन्द्र कस्तो बनाउने ? प्रचण्डले मागे सुझाव २० बैशाख २०७८, सोमबार २३:२३
बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक २० बैशाख २०७८, सोमबार २३:२३